Budata DotVPN maka Windows
Free Budata maka Windows (2.00 MB)
DotVPN bụ otu ihe kachasị amasị VPN site na ndị ọrụ Google Chrome. Na-enye anyị ohere ịbanye na mba iri na abụọ gburugburu ụwa, VPN na-echebe anyị pụọ nụdị mgbasa ozi niile na-emebi nzuzo nịntanetị, gụnyere mmapụta na ọkọlọtọ ọkọlọtọ na ibe weebụ. Gị abụọ na-emefu obere ngwungwu ịntanetị ma na-agagharị na ngwa ngwa.
VPN, nke na-enye nchebe (izo ya ezo na igodo 4096-bit) ka ị na-ewepụ ókèala ya na firewall ya na igwe ojii, ọ bụghị naanị na-enye gị ohere ịnweta ọrụ enweghị ike ịnweta mpaghara; Ọ na-ewepụkwa oke ọsọ. E kwesịghị ileghara ya anya na ọrụ VPN, nke na-enyekwa ohere ịnweta weebụsaịtị .onion ekele maka TOR, na-enye bandwidth a na-akparaghị ókè ma na-enye ohere ngbanwe sava na-akparaghị ókè (na-ejikọ na-akpaghị aka na ihe nkesa na-adịghị arụ ọrụ maka ebe a na-ahọrọ ahọrọ).
Bandwit a na - akparaghị ókè
Igwe ojii na-ekpuchi nchebe igwe ojii
Nchọgharị ngwa ngwa (adịchaghị)
Ọnọdụ 12 (Adịchaghị)
Izo ya ezo na 4096-bit key (adịchaghị)
Ad-free nchọgharị (Premium)
Serversnweta sava adịchaghị
Nha faịlụ: 2.00 MB
Mmepụta: Smart Security Ltd.